यूएस बांग्ला विमान दुर्घटनाः रनवेबारे असमझदारी
२८ फागुनमा ५१ जनाको ज्यान गएको यूएस बांग्ला एयरलाईन विमान दुर्घटनाको प्रमुख कारण ककपिटकै अलमल रहेको देखिन्छ । यसले दशकौंको राजनीतिक अन्योलपश्चात विस्तारै तंग्रिदै गएको नेपाली पर्यटन उद्योगमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
पहिलो विद्युतीय शवदाह यन्त्र
नेपालको पहिलो विद्युतीय शवदाह यन्त्र, जुन कहिल्यै प्रयोगमा आएन । तर आज समय परिवर्तन भएको छ । पशुपतिमा योभन्दा धेरै ठूलो शवदाह गृह चल्तीमा आएकै पाँच वर्ष भइसक्यो । ‘संस्कृति विरोधी’ भन्नेहरूको आवाज विलीन भइसक्यो ।
नबिर्सौं मौलिक हकको जग बसाल्ने २०४७ को संविधानलाई
जनतालाई रैती नभई आफ्नै ज्यान र अस्मिताको आफैं मालिक बनाइदिएको २०४७ को संविधानले हो । नेपालमा शताब्दीयौं गुम्सिएर बसेको पहिचानको सवालमा विद्रोही स्वर र क्रियाशीलता अगाडि आउने अवस्था बनाइदिएको यही संविधानले हो ।
मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रका विद्यार्थीले बुझ्नैपर्ने नाम हो– आस्मा जहाँगीर।
अधिकांश नेपालीले आस्मा जहाँगीरको नाम नै नसुनेको अवस्थामा उनको देहावसान भयो । तर त्यस्तो जीवन नरहँदा पनि हाम्रो लागि प्रेरक हुन सक्दछ, हुनुपर्छ । नेपालमा कानून पढ्ने, मानवअधिकारमा लागिपर्ने, सामाजिक उत्थानमा कार्यरत– जोकोहीलाई आस्माको उदाहरणीय जीवनले सदैव प्रेरणा देओस् ।
कलंकी–कोटेश्वर चक्रपथ विस्तारका क्रममा महालक्ष्मीस्थानदेखि बालकुमारीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको चौडा सडकमा गाडी हुँइकिन थालेपछि त्यत्रो चौडा सडकमा स्थानीय पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न खतरा हुन पुग्यो ।
सामाजिक सञ्जाल र विशेषगरी ट्वीटरमा चिन्ता पोख्ने क्रम शुरु भयो, यसले अनलाइन र अन्य मिडियालाई तान्यो, राम्रै बहस भयो । कसरी ट्वीटमार्फत जनसरोकारको सामाजिक विषय उठान हुन्छ, को कति पानीमा छ, देख्ने मौका मिल्यो ।
खतरामा स्थानीय सरकार !
संघीय संसद्को निर्वाचनपश्चात् जनादेश अनुसार राष्ट्रिय सरकार बनाउन भइरहेको अलमलमा पनि स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने चलखेललाई समय मिलेको छ ।
हालैको राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी कानून, कर्मचारी समायोजन ऐन, सहकारी कानून संशोधन, शिक्षा ऐन संशोधन आदिले संघीयता तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि खेलबाड गरेका छन् ।
संसारले मिस हलीलाई आज ‘हिमालयन क्रोनिक्लर’ भनेर चिन्छ । तर उनी आधुनिक नेपाली राजनीतिको प्रत्यक्षदर्शी र ‘आँखोदेखा’ संवाददाता पनि थिइन् ।
नेपालमा रेलको सपना फेरि देख्न थालिएको छ । जताततै रेलमार्ग जोड्न नेता–पार्टी तल्लीन छन् । कल्पना र सपनाको एउटा कुरा । तर, विपनामा भने हामीसँग दुइटा रेल लाइन थिए, उही जनकपुर–जयनगर र अमलेखगञ्ज–रक्सौल ।
प्रदेश–२ को राजधानी सागरनाथ किन नहुने ?
वागमतीमा नुहाउन काठमाडौंवासी मधेश झर्दा हुन्छ।
आन्तरिक आतंक भोगिसक्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय आतंक छिर्न नदिऊँ
भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तान विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको मारमा छन्, जसले ती एक–एक मुलुकको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत असर पारेको छ, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।
अजब-गजबको हाम्रो सम्पत्ति हिमाल चिनौं
हिमाली शृंखला अरु कसैसँग नभएको अजब–गजबको सम्पत्ति हो– हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका नागरिकको।
ट्वीटे भइएछ !
सबै भन्छन्– सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय सञ्चारले छापाको ठाउँ ओगट्यो । हुन पनि, धेरै हदसम्म समाचार बनाउने, पेश गर्ने र पचाउने प्रक्रियामा गत पाँच–सात वर्षमा ठूलो फेरबदल आएको छ, समुद्रपारजस्तै दक्षिणएशिया र नेपालमा ।
ऐतिहासिकतालाई मार हान्ने वर्तमान पुस्ता
२००० वर्षसम्म यी स्तूप यस्तै रहे, तर १५–२० वर्षयता त्यो प्राचीन आकार तथा भौगोलिक परिवेश ध्वस्त पार्न हामी सफल भयौं ।
अपरिहार्य लोकतान्त्रिक स्थिरता
समृद्धिको कुरा सबै गर्दछन् र नेपालमा यो सजिलै सम्भव पनि छ । प्राकृतिक स्रोत तथा मानव स्रोतमा धनी नेपाललाई आर्थिक फड्को मार्नका लागि भने ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ अपरिहार्य छ ।
भूकम्पबाट भत्किएका मठमन्दिरको पुनःनिर्माणमा जति ढिलाइ गर्‍यो, उत्ति नै गैर–भौतिक सम्पदा लोप हुँदै जानेछन्– पूजा, नाच, जात्रा, मेला सबै । अनि लोप हुँदै जानेछन् यी सबैसँग सम्बन्धित ध्वनि, सुवास, स्वाद, दृश्य र औंलाको ‘टच्’ पनि ।
बन्दीपुर वरिपरिका पहाडको विशेष आकार छ, हात्ती जस्तो भनौं । त्यसको आफ्नै आकर्षण छ । बजारको एकापट्टि हिमालै हिमाल हेर्दै लञ्च खान पाइन्छ भने अर्कोपट्टि महाभारत लेकको पत्रपत्र नियाल्दै डिनर ।
मेघालयमा ‘कोइला काट्दै’
फिल्म निर्माता चन्द्रशेखर रेड्डीका अनुसार सुरज राई अझै कोइला काट्दैछन्, त्यहाँ । उनी नेपाल आएर काम गर्न चाहन्छन् रे ! निशान्त राई काठमाडौं उक्लिए भन्ने सुनिएको थियो, तर फेरि खबर आयो उनी त मलेशिया पुगे रे !
उनले कुनैवेला फर्केर कोइलाखानीमा मजदूरी गर्नेहरूको फोटो प्रदर्शनी काठमाडौंमा गरुन्, नेपालमै स्टुडियो खोलुन् र आफ्नी ‘सपनाकी रानी’ सँग सुखमय जीवन बिताउन् ।
लोप हुँदै गोरेटाहरू
आज मूलबाटोको कुरै नगरौं, गाउँगाउँ जोड्ने गोरेटाहरू पनि धेरै ठाउँमा लोप भइसके । तल्लो र माथिल्लो गाउँको पनि त्यस्तै हाल । सडक जताततै बनेकै छन्, ‘डोजर डिजाइन’ का, मोटर–बस नभए पनि मोटरसाइकल छँदैछन्, अनि को हिंडोस् ?